Xalka Galmudug oo aan weli laga raadin halka uu jiro iyo talo ku socoto Farmaajo!! – Madal Furan
Hoy > Warka > Xalka Galmudug oo aan weli laga raadin halka uu jiro iyo talo ku socoto Farmaajo!!
Xalka Galmudug oo aan weli laga raadin halka uu jiro iyo talo ku socoto Farmaajo!!
Editor September 23, 2018 0
Madal Furan – Xaaladda Maamulka Galmudug ayaa ah mid aad u khasan waxaana maamulkaas soo wajahay Caqabado intiisa badan ka imaanayo madaxda ugu sareyso.
Khilaafkaan ayaa wuxuu soo bilowday tan iyo markii uu Axmed Ducaale Geelle Xaaf noqday Madaxweynaha Galmudug markii uu jiraday Madaxweynihii ka horeeyey Cabdikariin Xuseen Guuleed.
Inta badan Khilaafka ayaa salka ku hayo muran u dhaxeeyo madaxda ugu sareyso maamulkaas oo ay ugu horeeyaan Madaxweyne Xaaf, ku xigeynkiisa, Guddoomiyaha Baarlamaanka iyo labadiisa ku xigeen.
Ku xigeenka Koowaad ee Baarlamaanka Xareed ayaa isaga la safan madaxweyne Xaaf halka ku xigeenka labaad uu la safan yahay Casir iyo Carabey.
Xildhibaannada ayaa sheegay in dood socotay saddex maalmood oo ay xaadireen 140 Xildhibaan xilkii looga qaaday Maxamed Xaashi Cabdi Carrabeey.
Arrinta meesha ay ka qaldan tahay ayaa ah in Madaxda ugu sareyso Galmudug aysan dhammaantood ka shaqeeneyn danaha dadka dagan deegaanadaas oo ay ku magacabaan yihiin inay wax u qabtaan.
Waxaa muuqato waxa la isku hayo inay tahay dano siyaasadeed oo uu mid kasta doonayo inuu helo lacag iyo sidii uu halkaas kusii joogi lahaa.
Halkee xalka Jiraa
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa markii labaad isugu yeertay Madaxda Galmudug si Muqdisho loogu qabto dib u heshiisiin.
Dhawaan ayey aheyd markii Madaxweynaha uu sidaan oo kale kulan ugu qabtay Madaxda Galmudug oo qaab la mid ah qaabkaan sheegay inay xilalka isaga qaadeyn.
Xalka Galmudug ayaa ku jiro in Meesha laga saaro dhammaan madaxda isku dhagan isla markaasna uu Baarlamaanka Galmudug qaban qaabiyo doorasho cusub iyo musharixiin cusub.
Weliba waxaa haboon in Sharuudaha lagu daro inaysan isisoo sharixi karin Madaxda Hadda talada heyso sida: Madaxweynaha, ku xigeenkiisa, Guddoomiyaha Baarlamaanka iyo labadiisa ku xigeen.
Waxaa looga fadhiyaa Madaxweyne Farmaajo inuu qaato go’aankaas isla markaasna uu si cad u sheego inaysan dowladiisa la shaqeyn doonin madaxda Galmudug ee hadda talada hayo isla markaasna la isugu waco baarlamaanka loona sheego inay hadda iyo doorasho u diyaar garoobaan.
Inkastoo Dowladda Dhexe lagu eedeeyo inay iyada qeyb ka tahay Khilaafka Galmudug ka taagan haddana maadaama la arkay inaysan sheekada xal laheyn waa in Meesha laga saaro dhammaan kuwa hadda hayo Talada Galmudug oo meeshaas ku qabsado shaqo aan aheyn middii loo dirsaday.
Waxaa Qoray Cabaas Cali Xasan
DAAWO: Guddoomiye Jawaari oo aqbalay mooshinka laga keenay
Xaqiiqada xariga coldoon iyo qaabkii loo qabtay.
RW Kheyre oo sheegay inaysan aqbaleyn ciidamo ka wada tirsan Dowladda & Ahlusunna oo is dhinac socda.